10 Akakosha Matipi eNovice Vatengesi | Martech Zone
Saka wagadzirira kucheka mazino ako mukumhanya-mhanya, inonakidza nyika yekutengesa. Kuzvikurudzira pachako pasina mubvunzo kwakakosha, asi iwe unodawo kugamuchira kune yakaedzwa-nguva-mazano uye unzwisise maitiro ekuishandisa pane ako mabasa uye nharaunda yekushanda. Ramba uchiverengera mapfumbamwe anonongedzera ayo anokubatsira iwe kuti uwane, ukure uye ubudirire uri muindasitiri yekushambadzira.
Iva Anoda Kubvunza - Gara uchiedza kutarisa mamiriro ezvinhu, matekinoroji, uye mafambiro nechinangwa chekufukura izvo zvaunogona kunhonga kubva kwavari kuti ushandise mune rako rekushambadzira basa. Kana iwe uine pfungwa chaiyo, kutaurirana zvisina kujairika neshamwari yako yepamoyo kunogona kukonzera mazano matsva nezve kusimudzira bhuku rako revatengi revatengi.
Funga kunze kweBhokisi - Semutengesi wekutanga, iwe hauna hurefu pakati pevezera rako. Nekuda kweicho chokwadi, kumwe kutaurirana uye zviwanikwa zvinogona kuwanika kune vane ruzivo ruzivo zvichave zvisingabvumirwe kwauri panguva ino mune rako basa. Zvisinei, hapana chikonzero chekuora mwoyo. Zvikurudzire kuti ufunge kunze kwebhokisi, kupfuura zvakajairika matipi uye maitiro. Kugona kwako kugona kunogona kubhadhara kune vatengi uye kuwana kuyemurwa kubva kune vezera rako. Kuti upinde mutsika yekufunga nenzira dzinoshora zvinotarisirwa, ramba uchizvibvunza kuti, “Pane chimwe chinhu chandiri kusuwa here?"Kana kuti"Ndingagone kuenda nezve izvi neimwe nzira here?
Network Senge Pro - Sezvo iwe uri mutsva kune yekushambadzira indasitiri, iwe ungangodaro unonzwa zvirinani zvishoma kushomeka neinoonekwa kushomeka kwechiitiko, pamwe neruzivo kuti vanhu havasati vakuziva iwe parizvino. Nekudaro, iwe unogona achiri kuratidza vamwe iwe wagadzirira kupfuura kudzidza kudzidza kuve yakanakisa network.
Pese paunenge uri pamusangano, uchikurukura newaunoshanda navo masikati kana kugara muchitima panguva yekuenda kwako, gara wakagadzirira kutaura nezve rako basa. Funga chero munhu waunosangana neanogona mubatsiri uyo anogona kutora basa rako kune rimwe danho. Chengeta makadhi ebhizinesi paruoko uye nyora imwechete "yekutaura" yaunogona kushandisa kana mumwe munhu akabvunza, "Saka, unoitei?" Shingairira kuve pane kwako kwakanyanya hunhu nguva dzese, futi.
Maonero aunoita anogona kukonzera kuti vanhu vari munharaunda yako vafarire kukuziva iwe zvirinani uye nekuita zvavanogona kusimudzira basa rako, asi zvakare inogona kuve neakapesana.
Chengetedza Meseji Yako - Kunyengetedza hakusi nyore sezvazvinogona kuita, nekuti pane zvinhu zvausingakwanise kuzvidzora. Iwe unogona kubata zvimwe zvikamu zvemameseji iwe aunounza uchishandisa mazwi anokwezva, nyaya dzinodzokororwa, uye mienzaniso inosetsa, asi pfungwa dzevanhu dzinotorawo ruzivo rwavanonzwa nekurubatanidza kuti vadzokere kuzvakaitika zvakapfuura zvavakapfuura. Iwe haugone kudzora chinhu icho, asi unogona kushandisa simba pamusoro pekuti meseji inoonekwa sei.
Imwe nzira yekuita izvozvo ndeyekugadzira mirirosi, hunyanzvi uko mutauri anotevedzera mutauro wemuviri akacherechedzwa mumuteereri. Mirroring inobatsira kuvaka hukama uye kuita kuti vanhu vanzwe kusununguka muhuvepo, zvichivatungamira kuva vakasvinura-pfungwa nezvezvauri kutaura. Zvinoenderana nezvimwe ongororo, kuwedzera kwekutengesa kubva pa12.5 kusvika pa66 muzana kana magirazi ekuratidzira achishandiswa.
Zvijairire neKushambadzira Metric - Kune dzimwe nzira dziri nyore dzekuudza kana ako ekushambadza matekiniki ari kushanda sekufunga. Pamwe mumwe wevatengi vako aimbove mumhanzi superstar achidzokera kumashure muindasitiri yevaraidzo mushure megumi-gore hiatus. Iti iwe waona rake reBillboard masosi nekukurumidza kumhanyisa vhiki mushure mekumhanya-izere-peji kushambadzira mumagazini makuru uye wotangisa yakatsaurwa Youtube mushandirapamwe. Pane mukana wakanaka wekuti zvinhu zvawakaita kushambadza kuburitswa zvakakurudzira yakagadziriswa chati chati.
Zvisinei, pane dzimwe nguva, iwe uchada vimba nematanho asinganyatsooneka kuona kuti zvauri kuita zvinobatsira here, kana kana shanduko dzichidikanwa. Dhata nezve kushanya kwewebhusaiti, kuenda kumakonzati, kufarira muartist pamasocial media chiteshi uye kunyangwe kurodha pasi ringtone kunogona kutaurira ngano dzekutengesa nzira yakakodzera.
Chengeta Ziso Kufambira Mberi - Wakatodzidza kuti zvakakosha sei kuve nemafungiro ekubvunzurudza uye kuona kuti chero kusangana kunogona kukurudzira mazano akanaka pabasa rako rekushambadzira. Saizvozvo, shanda nesimba kuti urambe uri pamusoro pezviitiko zveindasitiri. Magazini ezvekutengesa, mawebhusaiti, uye mablog anopa ruzivo rwakanaka kwazvo rwunogona kukubatsira iwe kudzidza nezvenzira dzinoshanda nyowani vasati vajairika. Nyorera kuchinyorwa chino cheMartech uye teerera Douglas Karr's Martech Zone Kubvunzurudza Podcast! Iwe haugone kunzwisisa zvese zvinyorwa, asi nekufamba kwenguva unowedzera ruzivo rwako zvakanyanya.
Tora Kufuridzirwa kubva kune Vanoyemurika Vanhu - Sezvaunoshanda nzira yako kuburikidza neyekushambadzira indasitiri, ramba uchizvininipisa uye gara uchizviisa pachezvako kune vanhu vekwaunoyemura. Ivo vanhu vanogona kunge vasina kana muindasitiri yekushambadzira, asi vanogona vachiri kukudzidzisa iwe misimboti inobatsira pakuzadzisa zvinangwa zvako. Kana vanhu vanokukurudzira vane mukurumbira, funga kurodha pasi podcast, kuverenga autobiographies, kana kutarisa Youtube kubvunzurudzwa kuti uwane rumwe ruzivo nezve mashandiro epfungwa dzavo.
Wongorora Yekushambadzira Automation Technologies - Sekureva kwevamwe vaongorori veindasitiri, ruzivo rwekushambadzira michina iri mu-kudiwa hunyanzvi hunogona kukubatsira iwe kuenda kumberi paunenge uchifamba munzvimbo inogara ichichinja. Kunze kwekuve neruzivo pamusoro penyaya iri kuwedzera kukurumbira, unogona kuve unoshanda zvakanyanya nemabasa ezuva nezuva. Kushambadzira otomatiki kunoita kuti zvive nyore kuparadzira izwi, kugadzira zvinongedzo, uye kutaurirana nevatengi, pasina kutambisa nguva kuburikidza nekudzikisira.
Ratidza Kushivirira - Mukukurumidza kwako kuita fambiro mberi uye kuwana mhedzisiro kune yako kero yevatengi, unogona kusashivirira, kunyanya kana zvichiratidzika senge mashandiro matsva ekushandisa haasi kushanda. Sezvakangoomesa sezvazvichazove dzimwe nguva, iva nemoyo wekutsungirira. Iwe haugone kuona mibairo mikuru husiku. Kushivirira kwakakosha, kunyanya usati waongorora data kuti uone kana kufungira kwako kuri kwechokwadi.
Joinha Kushambadzira Nharaunda - Kushambadzira kwemazuva ano kunonyanya kubva pane tekinoroji kuti ishandise nekuyera nzira zvine mashoma zviwanikwa. Zvishandiso zviripo kubatsira uye iwe unogona kudzidza tani kungobvunza mibvunzo yehunyanzvi munharaunda medu. Ive neshuwa yekujoinha nharaunda dzekushambadzira munzvimbo dzese dzemagariro - kunyanya idzo dzinotaura kushambadza mukati meindastiri yako. Iwe haunzwisise hurukuro dzese - asi iwe unotora matipi makuru ayo achakubatsira iwe kuwedzera ruzivo rwako nekufamba kwenguva.
Kugamuchirwa, Mutengesi Mutsva!
Ndinovimba, aya matipi gumi anokubatsira kuti uwedzere kuva nechivimbo semushambadzi mutsva. Rangarira, kunyangwe kana iwe uchinge washanduka kubva kune nyanzvi yekushambadzira kune nyanzvi inoonekwa, zvinogara zviripo zvakawanda zvekudzidza.
Tags: kuva mushambadziindasitiridzidza kushambadziraMarketingindasitiri yekushambadziramartechsamamburenetworkingvatsva vatsvanovice vatengesinovice kushambadzira
3 Nzvimbo dzeShanduko dzeDhiamendi-Rutivi Mapuratifomu muna2017